Ubumfihlo - iBuddhatrends
Lo Mgaqo-nkqubo wemfihlo uchaza indlela ulwazi lwakho oluqokelelweyo, olusetyenzisiweyo, nolwabelwana ngayo xa u tyelela okanye uthenge ukuthenga kwi-www.buddhatrends.com ("iSayithi").
Ukongeza, xa uthengwa okanye uzama ukuthenga ngeSayithi, siqokelela ulwazi oluthile oluvela kuwe, kuquka negama lakho, idilesi yokuthengisa, idilesi yokuthumela, ulwazi lweentlawulo kuquka amanani ekhadi lesikweletu, idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Sibhekisela kule nkcazelo "njengeNkcukacha zoMyalelo".
- Inkcazo yethu imiyalelo yengozi okanye ukukhwabanisa;
Ekugqibeleni, sinokubelana ngolwazi lwakho oluntu ukuba luhambisane nemithetho nemimiselo efanelekileyo, ukuphendula kwi-subpoena, imvume yokukhangela okanye ezinye izicelo ezisemthethweni zolwazi esilutholayo okanye ukukhusela amalungelo ethu.
I-Site ayilungiselelwe abantu abangaphantsi kweminyaka yobudala be-18
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga neendlela zethu zobumfihlo, ukuba unemibuzo, okanye ukuba ungathanda ukwenza isikhalazo, nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyili kwi support@buddhatrends.com okanye ngeposi usebenzisa iinkcukacha ezinikeziwe ngezantsi:
5900 rue de Verdun eMontreal Quebec CA H4H 1M4